Chii Chinonzi Biostimulant Inoita Mune Iyo Chirimwa? - Potatoes News
Biostimulants, inoshandiswa nenzira kwayo, inoita kuti goho riwedzere kusimba. Sei?
Mukupedzisira Newsletter isu takakuudza izvo abiotic zvinhu (zvinosanganisira kupisa uye kusanaya kwemvura) uye kuti zvinogona kukonzera kushushikana muzvirimwa uye nekudaro kuburitsa kurasikirwa.
Varimi vane simba vanowedzera kunzwa mhedzisiro yekushanduka kwemamiriro ekunze muzvikwama zvavo mumakore anotevera. Kukanganisa kwemari nekuda kweshanduko yemamiriro ekunze kunogona kusvika pamakumi mashanu muzana emari inowanikwa ne50. Izvi ndizvo zvakataurwa nemuongorori weWUR Daan Verstand panguva NPPL webinar 'Mamiriro ekunze kwadzakabva : kubata neyakaoma uye yakanyorova ' .
Nei kupisa nekusanaya kwemvura chiri dambudziko riri kuwedzera?
Zvirimwa zvinogara zvichichinjika kune kunetseka kwemamiriro ekunze. Nekudaro, kana kushushikana kwakanyanyisa kana kureba, zvirimwa 'kushushikana kwekushushikana nzira hazvichakwanise kusangana nemamiriro ezvinhu akaipisisa. Izvi zvinogona kutungamira mukukuvara kwakakura. Nguva dzekupisa nekusanaya kazhinji dzinova dzakareba uye dzakanyanya uye dzinowanzoitika kamwe kamwe.
Izvi zvinogona kuonekwawo mumunda here?
Gore rapfuura Syngenta yakaitisa yakakura-muyedzo yemunda miedzo mumatatata muUK vachishandisa biostimulant Quantis.
"Mumakumi matatu emumiedzo yemumunda netembiricha iri pamusoro pe30 ° C neanopfuura maawa mana pazuva, zvibereko zveQuantis zvaive 25 t / ha zvakakwirira paavhareji. Zvinoshamisa, mhinduro hombe maererano negoho uye kukura kwetuber yakaitika kakawanda mumwaka uye mumamiriro ezvinhu ane tembiricha yakanyanya. ”
anodaro David King, technical Manager kuSyngenta UK.
Iko kunokanganisa kupisa kunetseka kune mbatatisi?
Dyara zvidzidzo zvemuviri zvinoratidza kuti kana zvirimwa zviri pasi pekushushikana, maseru anopindura padanho remoremu kudzikisira mhedzisiro yekupisa nekusanaya kwemvura.
Chero nguva iyo sero mashandiro paanochinja, simba rinodiwa iro rinogona kushandiswa kukura kwemakabohydrate uye chengetedzo, semuenzaniso mumidzi yembatatisi uye machubhu.
Mhedzisiro yacho inogona kuve kudzikiswa kwegoho mune ese ari maviri nhamba uye saizi yematubhu, pamwe nekuenderana kwehunhu.
Gore rino, Syngenta yatangawo mikuru miedzo inoshanda muNetherlands, pamwe nevarimi uye HAS Den Bosch, kuwana mufananidzo wakajeka wehuwandu hwakawedzerwa hweQuantis: Can Quantis inogona kudzikisira kukuvara kunokonzerwa nekusanaya uye kunetseka kwekupisa uye kudzivirira kuderera kwegoho. nekuda kwekunetseka?
Chii chinonzi osmo-chengetedza basa reQuantis?
Pakangopinda masero kupera nemvura nekuda kwekupisa uye kusanaya kwemvura, iwo anova asinganyatso kushanda uye asinganyorwe nekushushikana nemhedzisiro. Quantis 'osmo-yekudzivirira basa inosimbisa iyo plasma membrane yakakomberedza sero. Izvi zvinobvumira iyo turgor kumanikidza (kumanikidza muchitokisi kunochengeta mvura muchitokisi) kuti irambe iri munzira, ichibvumira kuti sero irambe ichishanda nemazvo.
Ungada here kuziva kuti Quantis inoshanda sei mukuita?
Chete nekutsvagisa kwakanaka uye nezano rakanyatsonaka mazano ndipo patinogona kuumba mufananidzo wekuti maQuantis anokwanisa kushandiswa zvakadii, saka zano rekushandisa chairo nderei kune varimi.
Ramba wakarongedzwa, isu tinodzoka nguva zhinji neruzivo rwakawanda nezve yegore rino miedzo yemunda uye tinokuchengeta iwe uchivandudza pane zvedu zviitiko .
Chii chinoitwa neBiostimulant mune chirimwa?
Tags: abiotic zvinhuAdsKuchinja Kwemamiriro ekunzeKunetseka kwekupisaQuantisSyngenta
Ongororo yevarimi inoratidza shanduko yemamiriro ekunze sengozi huru mukugadzirwa kwe mbatatisi muEurope
Kupisa kwehupenyu hwehutachiona paIdaho Ag
Isa slurry zvakanaka mumbeu mbatatisi
Greenvale inoita yayo FareShare kurwisa chikafu chikafu
Gore rakanaka rema spud muIdaho, vatengesi vanoti